प्रधानसेनापति पुरुष भलिबलको फाइनल खेल आज, आर्मी र गण्डकी प्रदेश भिड्दै ! - नेपालबहस
गृहपृष्ठ खेलकुद भलिबल प्रधानसेनापति पुरुष भलिबलको फाइनल खेल आज, आर्मी र गण्डकी प्रदेश भिड्दै !
काठमाडौं । चौथो संस्करणको प्रधानसेनापति राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल आज ‘सोमबार’ हुँदैछ ।लगनखेलस्थित सैनिक शारीरिक तालिम तथा खेलकुद केन्द्रमा हुने उपाधि भिडन्तमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र गण्डकी प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
यसअघि आइतबार फाइनल हुने जनाईए पनि सार्वजनिक विदाको कारण फाइनल खेल सोमबार सारिएको हो । फाइनल खेल अपरान्ह ४ बजेपछि हुनेछ ।
साविकको विजेता समेत रहेको आर्मी लगातार चौंथो पटक उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रने छन् । आर्मीले सेमिफाइनलमा अर्को विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबलाई ३९१ को सेटमा पराजित गरेको थियो । बलियो पुलिसलाई हराउन सफल आर्मी उक्त लयलाई कायम राख्ने योजनामा हुनेछ ।
नेपाली सेनाको आयोजनामा जारी प्रतियोगिताको विजेताले ३ लाख प्राप्त गर्नेछ । यस्तै उपविजेताले १ लाख ५० हजार प्राप्त गर्ने छन् । प्रतियोगितामा नेपाल पुलिसले तेस्रो स्थान हासिल गरिसकेको छ ।
यस्तै प्रतियोगिताको सर्वोकृष्ट खेलाडीले पल्सर बाइक प्राप्त गर्ने छन् । त्यस्तै व्यक्तिगत विधातर्फ उत्कृष्ट स्पाइकर, ब्लकर, डिफेन्डर, लिफ्टर, सर्भर र प्रशिक्षकले जनही १० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने छन्।
अघिल्लो लेखरङ्गशालाको बार भत्काउने आरोपी प्रकाश कँडेलसहित सबै छुटे
अर्को लेखलोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन !
गण्डकी प्रदेश : बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि प्राथामिकतामा
चक्लाबन्दी जमीनमा खेतीको तयारी
गण्डकी प्रदेशमा उच्च सुरक्षा सतर्कता, आवतजावतमा थप कडाइ
जमीन समथर बनाइँदै
कार्यक्षेत्रमा सक्रिय रहेका पत्रकारलाई सुरक्षा सामग्री वितरण